Umtshato kwi-Sweden: indlela enye a Swede - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ngenxa yale maninzi kakhulu umbutho kwaye punctual
Zonke ezi imibandela kwenza umtshato kwi-Sweden kakhulu nabafana khetho kuba lonely girls. Kodwa uphumelele khange edibeneyo ubomi engenakwenzeka umahluko mentalities. Ngoku zama ukuqonda. Malunga abemi bamazwe Nordic amazwe kukho ezininzi stereotypes. Ngabo supposedly ngaphandle yeemvakalelo zakho kwaye kunzima zithungelana. Enyanisweni, Danes, Finns kwaye Swedes unako k ubonakala ngathi kokukhona kunyulo olunoxolo kunokuba sisebenzisa accustomed yokucinga nabo, ngakumbi xa kuthelekiswa kunye nezinye Europeans.
I-Prussia kwaye Spaniards kuthelekiswa nabo - nje zange-ukuphelisa umthombo emotions.
Nangona kunjalo, onjalo Swedes ngayo nayiphi na indlela akunakwenzeka ukuba igama absolutely hayi adapted ukuba unxibelelwano. Oko ke opposite. Oku kubaluleke ngakumbi ngokucacileyo manifested zabo ukuziphatha ngendlela romanticcomment budlelwane. I-Swede rhoqo esiza kuye nge uphawu le isizwe meticulousness kwaye seriousness. Ukuba akwanelisekanga kokufunyenwe into ebomini bakho kunye - musa kuba besoyika ukuba umxelele. I-Swede kusoloko kuhlangana Nani kwaye ndiya kwenza yonke into kunokwenzeka ukuba nakanjani ukuphucula le meko. Oku zonke Swedes - nkqu enjalo delicate mba njengoko uthando, baya zama indlela kakhulu ngokucacileyo kwaye rationally. Uyakwazi umnxeba kwabo pedantic, baye bakhetha ukwenza yonke into kwi shedyuli. Ucwangciso - omnye ncwadi imisebenzi ezininzi Swedes. Isiswedish usapho (kuba Uthixo ke, ngenxa, yima discriminate ngokuchasene nalo ixesha, kuya zikho kuphela kwi-fantasies yabemi ka - amazwe owokuqala USSR) kwiziganeko eziliqela ayikho watshata officially. Rhoqo couples ukuphila kwiindawo zasekuhlaleni umtshato, kuphela apha ke ngokuba kancinci ezahlukeneyo kwaye iselwa officially lies kwi umasipala wengingqi. Oko kukuthi, kuya sele efanayo isemthethweni umkhosi njengoko urhulumente umtshato. Bakhetha ngayo kwi-Swedes ngenxa enjalo uhlobo ubudlelwane phakathi kulula kakhulu liyichithe (wokuqhawula umtshato watshata kakhulu expensive kwaye ixesha-consuming), xa wonke umntu ihlala ngexesha lakhe - hayi"edibeneyo ipropati", olu hlobo budlelwane akakwazi kubonelela. I-attitude ukuba olu hlobo umtshato ngu ezinzima - iminyaka emininzi abahlala olugqibeleleyo kweharmony kwaye hayi cinga ntoni singathi"ngenene". Usapho izibophelelo kwi-Sweden zisasazwa phakathi kwendoda nomfazi ngokulinganayo - omnye ingaba yintoni namnye unako. Umzekelo, umntu ayinakuze shirk ithuba hlala phantsi kunye umntwana. Kukho iimeko xa umfazi imisebenzi kwaye umyeni kunye yakhe izihlobo nezalamane zabo abantwana ehamba kwenye indawo kwi-Park okanye riding pants kwi-yesanti. Kwi-Sweden yinto eqhelekileyo senzo. Abantwana kwi-wobulali iintsapho elizimeleyo eyandisiweyo care isiswedish inkcubeko akakwazi kubonelela. Uninzi rhoqo, umntwana ubomi kunye abazali bakhe-kwaye ke izama yiya phantsi kwi name apartment. Oku akuthethi olugqityiweyo severance ka-ubudlelwane phakathi, kodwa yithi rhoqo appearing kunye isicelo ukunika imali loo mfana, uninzi kusenokwenzeka ukuba, andiyi. Urhulumente Sweden okusemandleni ukuze conveniently waphila hayi kuphela iimvamvanyo abahlali kodwa kanjalo visitors abo, umzekelo, ufuna enye a Swede.
Umzekelo, newcomers abakhoyo kokuya kwi-mtshato ukuba uhlale kweli lizwe kuba ixesha elide, kuba ithuba kuzimasa free izifundo kwi-Swedish ulwimi.
Ukongeza kwezi izifundo nkqu ezinikezelwe encinane stipend kuba ingakumbi elibalulekileyo. Nangona kunjalo, ngomhla wokuqala uza kuphela kufuneka ke apha ukuqonda elililo ezininzi. Large irhafu imali yi-Swedish abantu, asingawo ngelize. Oku evidenced ngomoya wobulali intlalontle indlela. Simahla amayeza nkqu ayisayi thetha - kubalulekile kuba commonplace uninzi amazwe Ezindala ihlabathi. Imfundo (lwesibini kuphakanyiswe) bamele kanjalo free, scholarships. Ummiselo emva kokuzalwa kuka umntwana unyaka omnye, kunye waqhubeka imisebenzi kunye bezinga umvuzo. De iminyaka umntwana ngu yithi rhoqo ihlawulwe imali evunyelweyo. Inqanaba umvuzo kweli lizwe enza kube nzima kuba uninzi Swedes ukuthenga ukongeza flats (okanye endaweni) indlu okanye cottage. Abaninzi ayoyika ukuyithenga kwi-installments.
Ukuba ufaka seriously ke get watshata kwi-Sweden, ngoko ke get ilungile kwangaphambili kuba ixesha elide linda kwaye rigorous indlela yonke inkqubo.
Ngenxa yokuba isiswedish umthetho wepalamente kweli intlonipho, omnye toughest. Fiancee visa yimeko ekhethekileyo uxwebhu kuba ubhaliso umtshato kwi-Sweden - kukho hayi, enye Kwenu, arriving apha kwi eqhelekileyo visitor okanye tourist visa. Amaxwebhu kuba oku, kunjalo, kufuneka uzimisele kwangaphambili. Kanye uluhlu khangela kunye Consulate, nangona kunjalo, Ngaba uninzi kusenokwenzeka ukuba kuza kufuneka incwadana yakho yokundwendwela, wokuzalwa isiqinisekiso kwaye isiqinisekiso usapho isimo (ubungqina ukuba utshatile).
Bonke kufuneka ziguqulelwe kwaye notarized.
Xa amaxwebhu ingaba ayingenisileyo, kuthatha abanye ixesha ngenxa yabo kwesigqibo. Ukuba namaphepha angama-siyavumelana, wena neqabane lakho fiance uza umenywe i-enze udliwano-ndlebe apho baya buza imibuzo malunga ubomi bakho kunye. Ukuba imizwa yakho ingaba enyanisekileyo kwaye intentions ingaba nyulu, kweli banga na iingxaki kwi-phambili uza lingenzi. I-enze udliwano-ndlebe ziza abe ngumguquleli. Emva kokuba enze udliwano-ndlebe, umasipala uza kukhupha Kuwe a umtshato sephepha-mvume, Ibandla okanye zasekuhlaleni - umyeni wakho ke oyikhethileyo. Kubalulekile, kodwa ke, asingabo bonke. Emva wedding uza mhlawumbi kuba ukuba emke elizweni, ngenxa nkqu umtshato ukuya ummi ka-Sweden hayi kuvumela ukuba uhlala apha kuba ixesha elide. Kuya kufuneka ukuba abuyele Ekhaya kwaye isicelo usapho reunification, nto leyo ikhutshelwe ubuncinane kwiinyanga ezintandathu. Ngoko hamba enye enze udliwano-ndlebe, iziphumo oko kuya kukunika sexeshana imboniselo indawo yokuhlala. Ngayo, unako officially umsebenzi get free imfundo.
Kufuneka uhlaziye kuyo yonke ezintandathu.
Epheleleyo yokuba ngumhlali, uza kunikwa ngokusebenzisa nyaka. Eneneni, ixesha lokugqibela i-Swedish abantu bamele kujike ikhangela enokwenzeka amaqabane bamthwala ngaphandle ngaphesheya. Yokuba isiswedish abafazi ingaba eba ngaphezulu kwaye ngaphezulu emancipirana begin ukudlala indima engundoqo, ilungu losapho. Ngathi ngu hayi kuba wonke umntu, kuba reconciled kunye enjalo imo Imicimbi musa ufuna ezininzi. Ngoko ke umtshato nge Swede ngu iselwa elide segolide ukuba ibe distant phupha - ngoku ibonakale hayi nje kunokwenzeka, kodwa kulula ngokwaneleyo. Nje wazi njani kwaye apho jonga. Indlela ezininzi - ukukhangela free Dating zephondo. Le ndlela, nangona kunjalo, ingaba ezininzi iifayile kakhulu ezibalulekileyo nokusilela. Ngo nokubhalisa kwezi websites, Wena ngokuzenzekelayo uyavuma ukuba inkcazelo Yakho yobuqu kuba ebonakalayo kwezinye site visitors. Kunjalo, awunokwazi kuba probed in kwemizuzwana, nangona kunjalo, ngoko ke xa kuqaliswayo uza cheat on yakho enokwenzeka groom, nkqu ukuba ufuna ukufumana ngayo kule ndawo. Endleleni, kanye kanye efanayo bube nokuza kwaye umlingane Wakho - personal intlanganiso Ufuna engathndwayo ukufumana ithuba khangela, uya pointed ngaphandle inyaniso kuwo onke amanqaku ka-inkangeleko yakho. Ulawulo lwe-enjalo zokusebenza ayikho nako ukuqinisekisa ulwazi abantu - koko inika iqonga yakhe. Yiyo kwi-ukhetho suitors ukusuka ngaphesheya, kubalulekile eyona ngoncedo iingcali - abantu abo izakunika isiqinisekiso ukuba umlingane Wakho ufumana enye abo ifuna ukuba ivele. Abakhoyo aba bantu.
Kwabo, ngokuqinisekileyo, nangona flickering apha kwaye akukho okuninzi.
Kwaye preference ngokucacileyo kuba abo iinkonzo bathe ukumelwa hayi kuphela kwi-intanethi, kodwa"live"e-ofisini, apho unako ukuza kwaye hlola inqanaba le-inkampani.
Kwi-Kharkov, oyena enjalo iziko yi-ngamazwe umtshato-Arhente. Ekubeni emva shoulders solid amava ukumiselwa kwebandla couples (besebenza unyaka bamisela ngaphezu a anamashumi ndonwabe iintsapho), i-Arhente inikezela ngamnye kubekho inkqubela epheleleyo umqolo iinkonzo - ukususela kumalungiselelo umdla kunye nabafana kuba abantu iphepha lemibuzo malunga ukunceda kunye paperwork kuyimfuneko kuba lwaphesheya kwaye ubhaliso umtshato apho. I-reputation ye-Arhente ivumela ngayo ukusebenza nge ngezixhobo ezahlukeneyo abantu ukusuka zonke phezu kwehlabathi.
Phakathi amazwe apho girls kuba nethuba enye: Sweden, Edenmark, Ijamani, France, Italy, Usirayeli, e-USA kunye nabanye abaninzi.
Abameli zonke ezi amazwe tested kwaye ngokupheleleyo imali ye-Arhente ke umsebenzi, ukuvumela girls absolutely free ithuba ukufumana umphefumlo wakho mate phakathi ngempumelelo abavela kumazwe angaphandle amadoda, abo ngesizathu esithile abanalo wabona lencwadi ithi phezulu companion Ekhaya. Kufuneka ithuba bathabathe kule ndawo, yaye okubaluleke kakhulu - kuba ngokwakho. Ngoko ke kufuneka enze isigqibo zama ukwakha ezinzima ubudlelwane kunye umntu ovela kwelinye ilizwe. Kukho nayiphi na ezikhethekileyo imigaqo dictated yi-familiarity kunye foreigners. Ubukhulu becala, kunjalo, ke zonke efanayo imigaqo Ufuna ebukekayo, zalo lonke udidi, funny, abaninzi ukufumana kwakho nabafana, kodwa ubudlelwane abantu iingcaphephe musa stack. Kubonakala ukuba abe kwaye izincomo ukwenza kumhla mema. Kuphela apha ngaphaya ukuba akekho"Kulungile, kutheni na ukuba usoloko ngoko ke sour, kuba sisebenzisa esilungileyo Ndiya kuba kuni cake smash, kwaye wena musa efana nayo.Kutheni na wena offended ngoko ke ngokwakho.
ividiyo ukuncokola nge-girls- ubudala free Dating girls mobile Dating ividiyo incoko kwi-intanethi ngaphandle ubhaliso free esisicwangciso-mibuzo Dating jikelele ehlabathini ividiyo esisicwangciso-mibuzo roulette ngaphandle ubhaliso kuba free ividiyo incoko lonyaka ngesondo dating iwebhusayithi ividiyo Dating-intanethi elungele free